Thu, Jul 2, 2020 at 11:45am
लकडाउनको घोषणा लगत्तै बोल्यो चीनः हामी नेपालको साथमा छौं
काठमाडौं, ११ चैत । नेपालमा लकडाउन घाेषणा भए लगत्तै कोरोना संक्रमणविरुद्धको अभियानमा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल सरकारले कोरोना विपत्तिलाई मध्यनजर गर्दै देशभर लकडाउनको घोषणा गरेलगत्तै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले चीन नेपालको साथमा रहेको बताएकी हुन् । नेपाल सरकारले मुलुकभर लकडाउनको घोषणा गरेलगत्तै राजदूत यान्छीले ट्वीट गर्दै नेपाललाई सहयोग गर्न चीनले मेडिकल सामाग्रीहरु मिलाउँदै गरेको र आवश्यक सहयोग गर्न..
एक साताका लागि पूर्ण लकडाउनमा नेपाल, घरबाहिर निस्कन नपाइने
काठमाडौं , ११ चैत। सरकारले मंगलबार बिहान अर्थात अहिले ६ बजेदेखि लागु गरेको लकडाउन देशभर सुरु भएको छ । लकडाउन एकसातासम्म कायम रहनेछ । अर्थ तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १८ गते बिहान ६ बजेसम्म लकडाउन जारी रहने जानकारी गराएका छन् । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । निर्णयका बारेमा सोमबार बेलुका मात्रै अर्थ तथा सूचना तथा..
फ्रान्सबाट नेपाल आएका विद्यार्थीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि
काठमाडाैं, १० चैत। काठमाडौंमा कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले फ्रान्सबाट नेपाल आएकी नेपाली* विद्यार्थीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएका हुन् । १९ वर्षीय एक युवतीमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको र अहिले उनलाई टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा राखिएको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए । उनी गत चैत ४..
आजदेखि बन्द हुँदै भारत र चीनतर्फका सबै नाका
काठमाडाैं, १० चैत । साेमबारबाट भारत र चीनतर्फका सबै सीमा नाका एक साताका लागि बन्द हुने भएका छन्। काेराेना संक्रमणकाे त्रास बढेसंगै सरकारले यस्ताे निर्णय लिएकाे हाे। आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भोलि विहान १० बजेबाट एक साताका लागि नाका बन्द निर्णय गरेको हो । भारतमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि नेपालले सीमा नाका बन्द गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, भारतले ठोस जवाफ नदिँदा निर्णय हुन..
वीरगन्जका बिरामीमा कोरोना नभएकाे पुष्टी : सांसद र सिडिओले नै फैलाए अफवाह
वीरगन्ज, १० चैत । कोरोना भाइरसबारे गलत सूचना सम्प्रेषण नगर्न सरकारले पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने निर्णय पनि दिएको छ । तर, जिम्मेवार व्यक्तिले नै हल्ला फैलाउँदा आइतबार देशभर त्रास फैलियो । वीरगन्जका व्यवसायी शिवकुमार रुंगटामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको भन्दै आइतबार सांसद प्रदीप यादवले सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि देशभर सनसनी मच्चियो । पर्साका सिडिओ विष्णुकुमार कार्की र सहायक सिडिओ ललितकुमार बस्नेतले समेत..
आज मध्य रातदेखि कञ्चनपुर ‘लक डाउन’, सम्पुर्ण नाका बन्द गर्ने
कञ्चनपुर, ९ चैत । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले आइतबार राति १२ बजेदेखि घरबाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार बसेको बैठकले सर्वसाधारण नागरिकलाई आकस्मिक उपचारबाहेक अन्य कामका लागि घरबाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको हाे । यदि सूचनाको बर्खिलाप गरी घरबाहिर निस्किए सुरक्षाकर्मीले कानून बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको छ । प्रशासनले आइतबार रातिदेखि खाद्यान्न, दूध, औषधि, पानी, पेट्रोलियम..
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक
काठमाडौं, ९ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार (आज) दिउँसो ४ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले मन्त्रिपरिषदको बैठक बोलाइएको जानकारी दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपणपछि आज पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्का बैठक बोलाएका हुन् । फागुन १८ गतेपछि आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्ने लागको हो । उक्त १८ गतेको बैठकले कोरोना संक्रमणको रोकथाम..
दैनिक ४० हजार थान निःशुल्क माक्स र स्यानिटाइजर वितरण गर्दै महानगर
काठमाडौं, ९ चैत । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजदेखि आफ्ना वडा बासीलाई दैनिक ४० हजार थान माक्स र स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउने भएको छ । महानगरले दैनिक प्रत्येक वडालाई एक हजार थान मास्क र आधा लिटरका २ थान स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउन लागेको हो । साथै महानगरले ठूला वडालाई चार लाख र मझौला तथा साना वडालाई तीन लाखका दरले बजेट समेत उपलब्ध गराएको छ ।..
शीर्ष दलका नेताहरू ‘सेल्फ आइसोलेसन’ मा
काठमाडाैं, ९ चैत। कारोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमणका कारण राजनीतिक दलले आ-आफ्ना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्। राजनीतिक दलका नेता कार्यक्रम स्थगित गरी कोरोना भाइरसबाट सचेत हुन थालेका छन्। प्रमुख पार्टीका प्रायः सबै नेता घरमै ‘सेल्फ आइसोलेसन’ मा बस्न थालेका खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा सुरेशकुमार यादवले लेखेका छन्। मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक भेटघाट बन्द गरेका छन्। नेकपाकै..
कालोबजारी गरे ५ वर्ष कैद: आपूर्ति मन्त्रालय
काठमाडाैं, ८ चैत। सरकारले दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेमाथि पाँच वर्ष कैद गर्ने निर्णय गरेको छ। खाद्यान्न, दाल, तेल, इन्धन, खाना पकाउने ग्यास, औषधिलगायतको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्ने उद्योगी, आयातकर्ता, थोक विक्रेता तथा खुद्रा विक्रेतालाई पाँच वर्षको कैद गर्ने निर्णय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको हो । मन्त्रालयले बजार अनुगमनका क्रममा अनुचित क्रियाकलाप..
सुकुमबासीलाई उपत्यकामा ६ आना, तराईमा १० धुर जग्गा
काठमाडाैं, ८ चैत। भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सुकुमबासी तथा भूमिहीनलाई आवासीय प्रयोजनका लागि पहाडको सहरी क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यकामा बढीमा ६ आना तथा तराईको सहरी क्षेत्रमा बढीमा १० धुर जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, सहरी क्षेत्रबाहेक तराईमा आवासका लागि बढीमा एक कठ्ठा, खेतीपातीका लागि ६ कठ्ठा जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ। काठमाडौं सहित ६ वटा महानगर र..
भारतबाट फर्किने नेपालीको लर्को: झन बढ्याे कोरोना भाइरसको सन्त्रास
काठमाडाैं, ८ चैत। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९ का रमेश विक रोजगारीका लागि भारतको चेन्नाई जाने गरेका छन् । उनी चार वर्षदेखि ओहोरदोहोर गर्दै आएका थिए । अहिले विश्वभरी महामारीका रुपमा कोरोना भाइरस फैलिएपछि उनी घर फर्किए । कैलालीको धनगढीस्थित त्रिनगर नाकामा रहेको ‘हेल्थ डेस्क’ मा स्वास्थ्यकर्मीले उनको ‘थर्मल गन’ (शारीरिक तापक्रम नाप्ने उपकरण) जाँच गरे । ‘कमाउनका लागि नियमित रुपमा भारत जाने गरेको..
यात्रुको चाप बढेसँगै भाडामा ठगी गर्ने २८ जना पक्राउ
काठमाडाैं, ८ चैत। सार्वजनिक यातायातको टिकटमा ठगी गर्ने २८ जना पक्राउ परेका छन्। टिकट काउन्टरका कर्मचारीले सवारीसाधन अभाव देखाएर यात्रुसँग तेब्बरसम्म भाडा असुलेको पाइएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसरका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले बताए। पक्राउ परेकालाई आइतबार अदालतमा उपस्थित गराइनेछ। उनले भने, ‘टिकट काउन्टर र बसपार्कमा यात्रुको चाप बढेसँगै गाडी ग्यारेजमा राखेर यात्रुसँग बार्गेनिङ गर्ने, बढी भाडा असल्ने गरेको पाएका छौं..
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन (पूर्णपाठ)
काठमाडौं, ७ चैत । सरकारले चैत ९ देखि २१ गतेसम्म अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै कार्यालय बन्द गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी संस्थाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् । पढ्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको संबोधनको पूर्णपाठ आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, आज म आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा होइन,..
लक डाउनको तयारीमा सरकार, राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाण्डौं, ७ चैत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा विशेष सम्बोधन गर्ने भएका छन् । विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको प्रभाव विस्तारित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले सरकारको तयारी सुसूचित गराउन सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार बेलुकी ६ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका छन् । बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी..
पशुपतिनाथकाे सन्ध्या आरती भोलिबाट बन्द, १५ जनाभन्दा धेरै मलामी नआउन आग्रह
काठमाडौं, ७ चैत । पशुपति क्षेत्रविकास कोषले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न १५ जनाभन्दा धेरै मलामी नआउन आग्रह गरेको छ । सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्दै आफन्त तथा शुभचिन्तकको मृत्युमा २५ जनाभन्दा धेरै मलामी नआउन आग्रह गरिएको कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जानकारी दिए । “हामीले निर्देशन पालना गराउन अनुगमन टोली पनि गठन गरिसकेका छौं,” सदस्य सचिव ढकालले भने, “कडाइका साथ निर्देशन पालना गर्नेछौं..
काेराेनाबाट विश्व आक्रान्त बनिरहँदा सरकार भन्छ आत्तिनुपर्दैन
काठमाडाैं, ७ चैत । विश्वका एक सय ७७ देशमा फैलिसकेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) नेपालसँग खुला सीमा रहेको भारतमा तीव्र बन्दै छ । सरकार भने नेपालमा संक्रमण नभएकाले नागरिकलाई नआत्तिन भनिरहेको छ । पूर्वतयारीबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले सरकार सबै पक्षमा सावधानीसहित तयारी अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने बताए । ‘सरकार स्वास्थ्य, सुरक्षा, आप्रवासन, आपूर्तिलगायत सबै क्षेत्रमा..
अब बिजुली, मालपोत र यातायात बिल तिर्न ढिलाे भए जरीवाना नलाग्‍ने
काठमाडौं, ६ चैत । अब बिजुली, मालपोत र यातायात बिल तिर्न ढिला भए जरीवाना नलाग्‍ने भएकाे छ । सरकारले सरकारी कार्यालयमा भिडभाड कम गर्न मालपोत, विद्युत, र यातायातमा लाग्ने जरीवानावापतको शुल्क मिनाह गर्ने भएको हाे। सरकारले रोकथाम तयारीबारे गरेका पछिल्ला निर्णय लागू गर्ने क्रममा बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विलम्ब शुल्क लाग्ने अवस्था भएमा सरकारले मिनाह गर्ने व्यवस्था मिलाउने आग्रह..
कोरोनाको सन्त्रासका कारण प्रचण्डले गरे सम्पूर्ण भेटघाट बन्द
काठमाडौं, ६ चैत । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 'नेकपा'का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोरोनाको सन्त्रास बढेकाले अति जरुरी बाहेकका अन्य भेटघाट बन्द गरेका छन् । विश्वभर फैलिइरहेको कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै भेटघाट बन्द गरिएको प्रचण्डकी छोरी समेत रहेकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले बताएकी छन् । गंगाले बिहीबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘विश्वभर माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा गरिने..
गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद बैंठक बस्दै
काठमाडौं, ६ चैत । आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बैठक राख्ने भएका छन् । बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयासदेखि हिजो कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन र अन्य थप नीतिगत निर्णय गर्ने बुझिएको छ । आज बस्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् बैठकले थप नीतिगत निर्णय समेत गर्ने प्रम कार्यालयका प्रवक्ता रोजन्द्रकुमार पौडेलले बताए..
कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिका र क्यानडाबीच सीमानाका बन्द गर्ने सहमति
एजेन्सी, ६ चैत । कोरोनाभाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर अमेरिका र क्यानडाबीच सीमानाका बन्द गर्ने सहमति भएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति तथा क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडाेले बढ्दो कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै दुई देशको सीमानाका बन्द गर्ने सहमति भएको हो। अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थाका लागि उनीहरूले सीमानाका बन्द गर्ने सहमति गरेका हुन्।'आपसी सहमतिमा हामीले अस्थायीरुपमा उत्तरी नाका बन्द गर्दैछौं', ट्रम्पले भने। बुधबारको छलफलपछि दुबै देशले नाका बन्द..
सरकारले लगायाे ५५ देशका नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध
काठमाडाैं, ६ चैत । सरकारले कोरोना संक्रमण 'कोभिड १९' देखिएकामध्ये ५५ देशबाट नेपालीसहित विदेशी नागरिकलाई नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले २० मार्चदेखि १५ अप्रिल (७ चैतदेखि ७ वैशाख २०७७) सम्म कोरोना प्रभावित देशमध्ये ५५ वटा देशबाट नेपाल आउने नेपालीसहित विदेशीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो । जसअनुसार युरोपका सबै मुलुक, पश्चिम..
सभामुख सापकोटा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाबीचकाे मनमुटाव उत्कर्षमा
काठमाडौं, ६ चैत । सभामुख अग्नि सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाबीचको मनमुटाव सतहमा देखिएको छ । सभामुख सापकोटाले संघीय संसद्को ‘कार्यवाहक’ महासचिवमा गोपालनाथ योगीलाई तोकेपछि त्यसमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख सापकोटाले बुधबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका विभिन्न समितिका सभापति, सभामुख र अध्यक्षबीच छलफल राखेकामा मनमुटावको प्रभाव देखिएको छ । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सो..
अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन सरकारकाे आग्रह
काठमाडौं, ६ चैत । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएकाे काेराेना भाइरसले माहामारीकाे रूप लिएपछि सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेकको अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको छ । बुधबार बसेको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन र हिँडडुल नगर्न सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको हो । त्यस्तै पार्टी प्यालेस, मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलमा २५ जना भन्दा बढी भेला..
एमसीसी र उपाध्यक्ष वामदेवबारे छलफल गर्न बस्दै सचिवालय बैठक
काठमाडौं, ५ चैत । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन 'एमसीसी' र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमबारे छलफल गर्न आज नेकपा सचिवायलय बैठक बस्दैछ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाउनुभएको सचिवालय बैठक दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हुनेछ । आजको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपणपछिको पहिलो हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत सहभागी हुनुहुने सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । नेकपा नेतृत्वलाई एमसीसी पारित गर्न..
Results 9709: You are at page 25 of 324